Hindiya: Jallianwala Bagh: Xaaladihii 1 650 Baddaba waxay isbeddeleen Mawduuca Dagaalka Xoriyadda ee India - TELES RELAY
ACCUEIL » International Hindiya: Jallianwala Bagh Xabsi: Sidee 1 650 Bullets Beddelay Mawduuca Dagaalka Xoriyadda ee Hindiya
Punjab, oo wuxuu arkay taxane ah oo musiibooyin weyn ee qarnigii la soo dhaafay, laga yaabee waligey illoobi doonin mid ka mid ah ka dhacay maalinta Baisakhi, 13 1919 ka April. xasuuqii ee Jallianwala Bagh, kaas oo ka dhacay kaliya bilo yar ka dib markii uu heshiis xabbad joojin November on January 11 1918, afjaridda Dagaalkii Adduunka ee First ee Europe, ayaa ka dhacay halka Punjab ee, Ciddi leh, jahaaday oo ahaa in halsano oo buuxa.
Shakhsigii Punjab ayaa gacan ka gaystay dadaalkii dagaalka gumeysiga ee dowladdii gumeysiga iyada oo qayb ka ahayd dadaalka dagaal ee xukuumadda gumeysiga: 3,55 000 dagaal afar sano oo isku xigta. Laakiin hoggaamiyeyaasha gumeysiga ayaa illowday dhammaan tallaabooyinka Punjab ee woqooyiga, iyada oo askartii gardarrada ee ka soo jeeda dhinacyo kala duwan oo Yurub ah ay dib ugu soo noqdeen guryahooda. Si loo xalliyo arrimo dheeraad ah, wax soo saarka liita ayaa sababay cunto yaraan iyo sicir bararka.
DIB U HESHIISYADA: Dadku waxay ku kulmaan Jallianwala Bagh kadib xasuuqii Baisakhi ee 1919
: Dadku waxay ku kulmaan Jallianwala Bagh dhawr bilood kadib xasuuqii Baisakhi ee 1919
Ingiriisku wuxuu bilaabay inuu dareemo markii uu hogaamiyeyaasha madax-banaanida Hindida ku baaqay in ay si deg deg ah uga soo horjeestaan ​​Sharciga Rowlatt ee maskaxda. Horudhacii la toogtay ee Jallianwala Bagh wuxuu ahaa mid dhab ah oo ku yaal Punjab bishii April 6, kaas oo Hindisaha Qaranka ee Hindida loo yaqaan "iskaashi iyo iskaa wax u qabso" oo ka dhan ah sharciga Rowlatt. Laakiin waxa bilowday inay noqoto mid nabadgelyo leh waxaa soo raacay rabshado ballaaran. "Haddii xasuuqii ka dhacay April 13, qof waliba wuxuu ka hadli lahaa rabshadihii April 10, oo ay ku dhinteen labaatan qof oo ay ku dhinteen biriijka jidka tareenka ee gobollada Ingiriiska. . Dad badan ayaa la afduubay afar ilaa shan qof oo reer Yurub ah ayaa la dilay. Waxay ahayd waqtigaan Miss Sherwood, oo ah adeegayaal aan hubaysnayn oo Ingiriis ah, ayaa la garaacay, "ayuu yidhi Amandeeep Singh Madra, taariikhyahan.
KALA DUWAN MUWAADIN: Dhibcaha kubbadda ku yaal derbi gudaha Jallianwala Bagh
KALA DUWAN MUWAADINKA: Dhibcaha kubbadda ku yaal derbi gudaha Jallianwala
Qaraxani wuxuu ahaa rabshad kacsan oo Ingiriis ah. "Brigadier-General General Reginald Dyer, oo ah sarkaal saddexaad oo loo diray Amritsar saacadaha 48, ayaa la weydiistay inuu noqdo mid adag. Waxay dhacday markii Ingiriisku la cararay oo uu dareemay soo galo. Ma ahayn nin waalan oo keligiis wax uun sameeya. Waxaa jiray walaac ku saabsan dhibaatooyinka. Dadka reer Hindiya ayaa ka soo horjeestay siyaasadda Ingiriiska, waxaana loo tixgeliyey inay yihiin kuwo cakiran. Laba hoggaamiye ayaa la xiray, "ayuu yidhi taariikhyahan British ah Kim Wagner.
Dad badan oo dad ah - ayaa lagu qiyaasay inta udhaxeysa 5 000 iyo 20 000 - waxay isugu yimaadeen Jallianwala Bagh maalinta Baisakhi. "Jawigu waa mugdi iyo baqdin ayaa lagu muujiyay wejiga iyadoo dadku dareemeen xannibaad gudaha magaalada ah. Bixitaan kastaa waa la ilaalinayay waana wax aan suurtagal ahayn in qofna uu ka tago fasax la'aan. Xitaa kuwa naftooda u arkay inay u dhow yihiin Ingiriiska waxay dareemeen xakameyn degdeg ah oo xiriirka ah, "ayuu yidhi Kishwar Desai, oo qoray buug ku saabsan dilka.
Sanad ka dib, tirada shuhadada lama caddeeyo
Inkasta oo xusuusta, xusuusta iyo buugaagta, liiska buuxa ee kuwa lagu dilay Jallianwala Bagh ayaa la daabacay ama la dhajiyay ilaa taariikhda. Masiibadu waa boqol sano kadib, liisaska oo dhan waxay u egtahay in ay jiraan waxyaabo kala duwan ama aan dhameystirneyn
Mar walba way adagtahay in la aqoonsado laguna uruuriyo magacyada kuwa lagu dilay Jallianwala Bagh. Ugu horreyntii, tani waxay sababtay xaqiiqda ah in shirkii Bagh uu ahaa mid aad u muhiim ah, inkastoo koontooyinka goobjoogayaasha ay kala duwanyihiin 5 000 iyo 30 000 dadka ama wax ka badan. Goobjoogayaasha ayaa markaa dib u soo xasuustay in dhimashada dhimashada ee Bagh uu ka weyn yahay 1 000. Ilaa iyo markii 1 650 rasaas lagu furay aagga la xiray - 1 000 dhaawacmay iyo dhaawacyo badan ayaa u muuqda kuwo la taaban karo ....
WAA INAAD AKHBAAHAY
Jallianwala Bagh waxay ahayd uun beerta magaca. Waxay ahayd xaqiiqo badan, banaanbax aan caadi ahayn oo ku wareegsan guryaha. Waxay ahayd waqtigii hantida gaarka loo leeyahay dad badan. Goobta ugu muhiimsan waxaa la heli karaa iyada oo loo marayo marinka cidhiidhiga ah. Afar ama shan dhibcood, waxaa suurtogal ah in ay ku dhex maraan kuwaan.
Dyer wuxuu yimid Bagh oo la socday askar 50 oo la socday .303 Lee - Enfield. Qaar kale waxay lahaayeen mindiyo ama khukris. Kooxdiisa ayaa kubbada 1 650 ku riday daqiiqado 10, waxay joojiyeen oo kaliya markii ayan haysan ammo. Wuxuu dadaal ugu jirey inuu gargaar caafimaad u fidiyo dadka dhaawaca ah, isaga oo ku doodaya inuusan ahayn waajibkiisa oo ka tagay meelo ba'an.
Maxaa Dyer wuxuu ku sheegay warbixintiisa August 25 1919
Waan ka xayiray, waan sii wadi doonaa dabka illaa inta ay dadku ku faafayaan ... Haddii ciidamo dheeraad ah ay gacanta ku hayaan, khasaaruhu wuu sii weynaan lahaa. Mar dambe ma ahayn wax su'aal ah oo kala jajabay dadkii badnaa, laakiin waxay soo saareen saameyn anshaxeed oo ku filan oo aan ahayn [...] kuwa hadda jira, gaar ahaan guud ahaan Punjab.
Dhaqdhaqaaqa Dire ee ah toogashada aan kala sooc lahayn ee dadka soo weeraray waxay ahaayeen: Zareer Masani, taariikhyahan British ah oo asal ahaan ka soo jeeda Hindiya, ka dibna wuxuu mamnuucay ciidamada Ingiriiska in ay ka hortagaan rayidka kadib. "Marka xitaa inta lagu guda jiro rabshadaha kala qaybinta markii dad badani ay dileen mid kale, ciidanka Britishka ah ee Britishka ma aysan soo faragelin sababtoo ah waa la mamnuucay. Ka hor intaan la xasuuqin, ma jirin xeerar gaar ah oo ka mamnuucaya inuu dabka ka furo dadka rayidka ah. "
Sidii Derye Jallianwala Bagh u galay 1919
kobciyaan dhaqdhaqaaqa xorta ah ee Hindida ah isla markaana ku siiyaan qaab cusub iyo dhiirigelin. Waxa kale oo uu dhiirrigeliyay dhaqdhaqaaqa dib u habeynta Gurdwara. Dyer ayaa lagu sharfay xadiiqooyinka dahabiga ah ee dahabiga ah ee siropa wuxuuna ku dhawaaqay xaqiiqda Sikh ka dib markii ay boqollaal dad ah oo aan waxba galabsan.
Dhacdadan ayaa laga yaabaa in ay sii xumaato kadib markii ay burburisay qaybta, laakiin xasuuqii ayaa weli ah mawduuc shucuur ah oo ku saabsan Punjabis.
UDHAM SINGH, MAN MADAXA MASRUUCA
Udham Singh ayaa toogtay Sir Michael O'Dwyer kulan ka dhacay Isku-xidhka Bariga Hindiya ee London bishii Maarso 13 1940. Dacwadiisii ​​uu dilka u geystay laba maalmood
14 March March 1940: Halkii Udham Singh, British daily Hull Daily Mail ayaa soo warisay in qaar ka mid ah Mohamed Singh Azad lagu xiray goobta. Jaahwareerka ku hareeraysan magaciisa ayaa qaatay waqti
14 Maarso 1940: halkii Udham Singh, British Hull Daily Mail ayaa soo warisay in qaar ka mid ah Maxamed Saalax Azad lagu xiray goobta.
Maalin ka dib markii Ghadar xisbiga kacaan, ku dhashay Sunam, Udham Singh, kacaan, ayaa toogtay Sir Michael O'Dwyer, hore Lieutenant Governor of British Punjab, shir of Association Indian Bariga ee Caxton. The March 14 1940, in Mirror Daily UK, Hall, ee London, wuxuu ahaa horyaalka ee calan: "shirqoolka lagu dilay wasiir, waxay dishaa geesigeeda a."
Inta lagu guda jiro layntii reer Jallianwala Bagh, O'Dwyer ahaa bar Arrimaha Punjab Ciddi ku hoos noolaayeen xukunka British inta lagu guda jiro gumaadka oo uu taageeray General Reginald Dyer General amray in ay toogtaan dadka rayidka aan hubaysnayn.
Udham Singh, oo xiran jaakad iyo koofiyad, ayaa riday dhowr tallaal, isaga oo ka tagay Lord Zetland, xoghayaha India; Lord Lamington, guddoomiyihii hore ee Bombay, iyo Sir Louis Dane, guddoomiyihii hore ee Punjab ayaa dhaawacmay. Waxa uu ku fiicnaaday isla markaana istaagay booska.
Anigu kama baqayo inaan dhinto. Waan ku faanayaa inaan dhinto. Waxaan rabaa inaan caawiyo waddankayga hooyo ...
Wargeyska maalinlaha ah ee Hull Daily Mail ayaa yidhi: "Mohamed Singh Azad ... Da 'Indian 37 Da' ayaa ka soo muuqday Bow Street ee London maanta. , ayaa lagu eedeeyay dilka Sir Michael O'Dwyer ... Dhexdhexaadinta, Azad ayaa la dhoola-tiray oo la sheekeystay saraakiisha la socday ... "
Magaciisa iyo diintiisa ayaa sababay wareer. Markii hore waxaa lagu soo oogay magaca Mahmoud Singh Azad, kadib markii la ogaaday in magaca baasaboorkiisa uu ahaa Udham Singh. Qoraalkiisa, oo la diiwaan geliyay dhacdada kadibna wuxuu soo saaray caddayn ku jira warbixinta 2 1940 Daily Mirror, akhriso: "Diyaar ma u tahay in la dhinto, ayuu yidhi Hindis ... waxaan u dhimanayaa waddankayga".
Maxkamadaynta dilka ayaa socon jirtay laba cisho, 4 iyo 5 June. Waxaa xiiso leh, markii Udham Singh la horgeeyay maxkamad, wuxuu ku eedeeyay "inaan dambiile ahayn".
Ingriis, Ingriis, waxay hoos u dhigeen maskaxaha, eeyaha wasakhda ah
Bishii Juun 5, xeer-ilaalinta ayaa su'aalo waydiiyay Udham Singh ka hor inta aan dacwadda la soo gabagabeyn, oo xeerbeegtana ay si buuxda u xukumeen dil. Racfaan isaga oo matalaya 24 June, isagoo ku eedeeyay difaac aan ku filnayn ka hor intaan xeerbeegtida la eryin. Waxaa lagu toogtay xabsiga Pentonville, London, 31 July 1940.
Xildhibaan Indira Gandhi wuxuu kudhiibay jidhkiisa Udham Singh ee magaalada Delhi. UK
Ra'iisul Wasaaraha India Indira Gandhi ayaa amaan balaaran u jeediyay Udham Singh oo ka yimid magaalada Delhi ee dalka Ingiriiska.
TRANSCRIPTION OF HUBINTA TALLAALKA
"Maxaabiista ku jirta bararka, waxaa laguugu xukumay dil. Ma leedahay wax ay ku odhan lahaayeen maxkamadda ma aad xukunto dil sida sharcigu leeyahay "weydiiyo xoghaynta inay Udham Singh maxkamadda Atkinson caddaaladda ee Old Bailey ah, London, on June 5 1940. Waa sax marka saacadaha 16. -beegtida ayaa si wadajir ah shaaca ka Udham Singh dambi ah dilka hore Lieutenant-Governor of Punjab, Sir Michael O'Dwyer Francis, ka dib markii maxkamad ka bilowday maalintii hore, 4 June, taas oo dhab ahaantii kartaan -waxaa ka mid ah dacwooyinka ugu gaaban ee taariikhda Old Bailey. 19659014] Sida laga soo xigtay diiwaanka maxkamadda, Udham Singh, oo ka mid ah qoraallada qoraalka ah ee udubdhexaadka ah ee TOI soo galisay, jawaab, "Haa, waxaan hayaa qoraal. Waxaan diidey boqortooyadii Ingiriiska ee Hindiya iyo nabad. Akhriso sheekadaada. Waxaad in badan oo ka mid ah wuxuush ka baxsan, qabow iyo dhiigyacabka ah, kaas oo xukumi jiray Hindiya ... "
Si kastaba ha noqotee, Cadaawe Atkinson waxa ay faragelisaa: "Ma dhegeysan doono hadal siyaasadeed". Wuxuu ka codsanayaa Udham in uu gudbiyo qoraalka uu akhriyo.
Garsoore Atkinson: "Miyuu ku qoran yahay Ingiriis?"
Udham Singh: "Haa."
Garsoore Atkinson: "Waan fahmi doonaa si ka fiican haddii aad i siiso si aan u akhristo. "
Udham Singh: "Maya, aniga qudheyda ayaan rabaa. Ma aha adiga. "
Atkinson JA: "Ma fahmi karo waxaad leedahay. "
Udham Singh: "Yaa akhrin doona? "
Judge Atkinson: "Waan akhrin doonaa.  Udham Singh: "Waxaan doonayaa xeerbeegtida iyo qof walba inuu akhriyo."
McClure (Talada Sharciga Xeer Ilaaliyaha Guud): Miyaan ku xasuusinayaa Shahaadadaada in Sharciga Difaaca uu siiyay awoodo u oggolaanaya Rabbigaa inuu kiis kastaa wax ka maqlo kamarad.
Garsoore Atkinson: Waxaad u maleyn kartaa in wax aanad sheegi doonin la daabici doono ...
Udham Singh: Waxaan u sameeyey si aan u mudaaharaadno, taasina waa waxa aan ula jeedo. Waxaan rabaa inaan sharaxo. Xeerbeegtarka ayaa lagu siiyay cinwaanka. Miyaan haatan akhriyaa?
Garsoore Atkinson: Haa, tallaabo qaado.
Udham Singh: Waxaan jeclaan lahaa inaan akhriyo qoraalka, waad ogtahay.
Garsoore Atkinson: Waxaad xaq u leedahay inaad wax uun sheegto ... maxaad u leedahay ciqaabta dilka inaan laguu sheegin. Xaq uma lihid inaad sameysid hadal siyaasadeed.
Udham Singh: Ma daneeyo dhimashada ... Ma akhrin karaa?
Garsoore Atkinson: U sheeg wax walba oo aad leedahay, laakiin illaa imika, sida aan ku maqli karo, waxaad bilowdey inaad disho xukuumadda Ingiriiska ama Boqortooyada Ingiriiska, mana dooneyno inaan halkaan heysano. Muhiim maaha.
Udham Singh: Ma cabsanayo in aan dhinto. Waan ku faanayaa inaan dhinto. Waxaan doonayaa inaan caawiyo waddankeyga hooyo waxaanan rajeynayaa in ka dib markaan baxo, qaar ka mid ah dadka isboortiga ah ayaa u yimid meeshan si ay u kaxeeyaan eeyaha wasaqda ah ... markaan xor ka ahaan doono dalka. Waxaan u muuqanayaa ka hor intaan Ingiriisi ah oo jury ah maxkamad Ingiriis ah. Waxaad tagtaa India, markaad dib u soo noqoto, waxaad heli doontaa abaalmarin waxaadna dhiganeysaa Golaha Wakiilada, laakiin markii aan imid England, waa lagaa dhimayaa. Si kastaba ha ahaatee, wax dan ah ma qabo, laakiin markaad nadiifisid eeyaha, waxaad u timaadaa Hindiya ... dadka caqliga ah, waxay isugu yeedhaan, hoggaamiyayaasha ... iyo waxay amar ku bixiyaan qoriga mishiinka si ay ula dagaallamaan ardayda Hindiya iyada oo aan lumin ... (lama huraan) ... dil, dameer iyo burburin. Waan ognahay waxa ka dhacaya Hindiya - boqolaal kun oo qof ayaa lagu diley eeyaha wasakhda ah.
Garsoore Atkinson: Anigu ma sii maqli doono wax badan oo ku saabsan sidaa darteed waxaad qori kartaa joornaalka. Waan ku xukumi doonaa
Udham Singh: Ma rabto inaad maqasho mar dambe.
Garsoore Atkinson: Anigu ma maqli doono wax intaas ka badan, laakiin haddii aad haysato wax khuseeya inaad sheegto ...
Udham Singh: Waxaad tahay wasakh. Ma rabto in aad naga maqasho waxaad ka qabaneyso Hindiya. Xayawaan, xayawaan, dugaag.
(Gaadhsiiyey naado ogeysiis)
Udham Singh: England, England, hoos u dhigista maskaxda, hoos eeyaha wasakhaysan.
Garsoore Atkinson ayaa markaa ku dhawaaqay xukunka dhimashada ...
(Waxaa soo tebiyay Yudhvir Rana, Vibhor Mohan, Naomi Township, Kamal Preet Kaur iyo Sanjeev Verma)
Barça: weli waa go'aan adag, Messi ayaa jabiyay rikoorkii guulaha horyaalka La Liga